यिनै हुन् नेपालकी एक मात्र हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने महिला उद्धार पाइलट…हेर्नुहोस् । – Yuwa Aawaj
यिनै हुन् नेपालकी एक मात्र हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने महिला उद्धार पाइलट…हेर्नुहोस् ।
माघ २०, २०७७ मंगलबार 617
काठमाडौं : ३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उ’द्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो ।
उ’द्धार पाइलटको जुन जिम्मे’वारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् । प्रिया ३० जना पुरुषको टिममा एक्ली महिला हुन् । उनले ९ वर्षको समयमा सगरमाथाको आसपासबाट १ हजारभन्दा बढीलाई उद्धा’र गरिसकेकी छिन् । प्रिया अधिकारीसँग भारतीय मिडिया दैनिक भास्करले कुराकानी गरेको छ । दैनिक भास्करकी पत्रकार उपमिता वा’जपेयीले आफ्नो मिडियाको लागि प्रिया अधिकारीसँग गरेको अन्त’रवार्ता यहाँ अनुवाद गरिएको छ ।
हाइस्कुलको पढाइपछि म मेडिकल कक्षामा भर्ना हुनको लागि भारत आ’न्ध्र प्रदेश पुगेकी थिएँ । त्यतिबेला भर्नाको प्रक्रिया चलिरहको थियो तर घरबाट फोन आयो । भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेको थियो तर घरबाट फोन आयो कि आमाको स्वास्थ्य खराब छ । त्यपछि म फर्कनु पर्यो । आमालाई सन्चो भएपछि मैले काठमाडौंमै बुद्ध एयरलाइन्समा क्याबिन क्रु’को जागिर गर्न थालें । त्यही क्रममा बीएस्सी गरे अनि एमबीए पनि । एक दिन कसैले मेरो दाइलाई आफ्नो साथीसँग भेटाए । उनी हेलिकप्टर पाइलट थिए । उनले मलाई साथमा उडानमा लैजान चाहे, म तयार भएँ । यो मेरो पहिलो हेलिकप्टर उडान थियो । घर आएर मैले आमासँग भनें बरु म ऋ’ण लिन्छु तर पाइलट नै बन्छु । पहिलो उडानको ४ महिनापछि नै मैले हेलिकप्टर उडाउँदैछु ।
म महिला हुँ त्यसैले मैले यो काम गर्न सक्दिन भन्ने सोचाइ मेरो दिमागमा कहिल्यै आएन । हो, आफ्नो सुरक्षाको लागि मैले बक्सिङ सिक्न सुरु गरें । ५ वर्षदेखि जहिले पनि काठमाडौंमा हुन्छु बिहान एक डेढ घण्टा बक्सिङ अभ्यास गर्छु । दैनिक योग पनि गर्छु । मेरो खल्तीमा सधैं एउटा चक्कु हुन्छ । यद्यपि यसको अहिलेसम्म जरुरत भने परेको छैन । मेरो एउटै सिद्धान्त के भने न’शामा भएको यात्रुलाई हेलिकप्टर चढ्न दिन्न ।
सगरमाथाकी एक्ली उद्धा’र पाइलटले संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरलाई कसरी हेर्छिन् ?
सगरमाथामा जानु बच्चाको खेल होइन । तर म कैयौं पटक यता आ’रोहीसँग भेट्छु जो केही सोचविचारै नगरी यहाँ आउँछन् । म आफैं कहिल्यै सगरमाथा आरो’हण गर्न चाहन्न । तर मलाई खुसी छ कि जहाँ सबै चढ्ने चाहन्छन् म त्यहाँ सिधै ल्याण्ड गर्छु ।
एकपटक १४ हजार फिट उचाइमा बेस थियो । त्यहाँ ५०० किलो सामान पुर्याउनु थियो । सामान अपलोड गर्नको लागि कोही पनि थिएनन् । अर्थात पाइलट पनि म र सामान चढाउन र ओराल्न पनि मेरै जिम्मा । त्यसपछि २०१५ मा नेपालमा भूक’म्प जाँदा ३ महिनासम्म दैनिक १०–१० राउण्ड लगाएकी थिएँ ।
भूकम्पको भोलिपल्ट पहिलो रे’स्क्यू ल्याण्डिङ जहाँ गरेकी थिएँ त्यहाँ अचानक १०० जनाको भीड हेलिकप्टरमा घुस्न लागे । सडक बन्द थिए, मानिसहरु बाटोमा फसेका थिए । मैले पहिले वृद्ध र बालबालिकालाई उ’द्धार गरें । बाँकी मानिसहरुसँग परिवारको नम्बर लेखेर मलाई दिन भनें । काठमाडौं पुगेर मैले हरेकको परिवारलाई फोन गरेर उनीहरुका आफन्त सुरक्षित भएको बताएँ ।
उ’द्धार र पर्यटकीय उडानमा के फरक महसुस गर्नुहुन्छ ?
म संसारकी सबैभन्दा बुढी पाइलट बन्न चाहन्छु । ६० को उमेरमा पनि म हेलिकप्टर उडाउन चाहन्छु । तत्काललाई स्लिङ अ’परेशनको तालिम लिने योजना छ जसमा उडानकै क्रममा डोरीबाट सामान र मानिसलाई ओरालिन्छ ।
मलाई लाग्दैन कि कोही कसैलाई इन्स्पा’यर गर्न सक्छ । तपाइँले आफैं सब गर्नुपर्छ । मैले सोचेकी थिएँ कि पाइलट बनेरै छाड्छु । जसरी प्रियंका चोपडाले जीवन, बिहे, करिअर, विवा’दलाई व्यवस्थापन गरेकी छिन् ।
Prevजापानको मासिक २ लाख कमाउने जागिर छाडेर,स्वेदशमा सैलुन पसलमा रमाउँदै राना मगर !
Nextभारतीय नागरिक नेपाल आउँदा अनिवार्य गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने…हेर्नुहोस् ।
अबदेखि प्रत्येक बुधबार श्रम स्वीकृति दिइने ।